'आकाश गड्याङगुडुङ' गरेको समयमा टिभी निभाउनु पर्छ कि पर्दैन ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
एजेन्सी । राती सुत्नु अघि मोबाइल चार्जमा लगाएर सुत्नुहुन्छ ? – पक्कै सुत्नुहुन्छ । दिनभरको कार्यव्यस्तता र धुपदौडका लागि मोबाइल अनिवार्य नै भइसकेको छ । दिनभर काम गरेर आएपछि सुत्नुअघिसम्म केहि समय मोबाइलमा हराउनुहुन्छ अनि सुत्नु अघि मोबाइल चार्जमा जोड्नुहुन्छ । कार्य व्यस्तता र सहजताको हिसाबले यो कुरा ठिक हो तर सुत्नु अघि मोबाइल चार्जमा ल्याउदा निकै भयनाक दुर्घटनाहरू भएका छन् ।
यस्तैमा आफूले सुत्नु अगाडि खाटमा चार्ज गरेर राखेको ट्याब्लेट बलेर बिहान उठ्दा डस्ना समेत प्वाल पारिदिएपछि एक एघार वर्षीय युवक आश्चर्यमा परे । यसरी धेरैपटक प्राविधिकविद्हरुले मोबाइल चार्ज गर्दा जल्न सक्ने वस्तुमाथि नराख्न सुझाव दिँदै आएका छन् । उसो भए कसरी चार्ज गर्नु सुरक्षित हुन्छ त ?
उनी भन्छन्, “यसलाई ब्याट्रिको ‘थर्मल रनवे’ भनिन्छ, जुन आफैँ तात्ने प्रक्रिया हो र यो लगातार तातिरहने गर्दछ । त्यसैले एउटा काठको टेबलमाथि चार्ज गर्नु उचित हुन सक्छ किनकी ब्याट्रिको ऊर्जा त्यसलाई जलाउन पर्याप्त हुँदैन तर कपडा, कागज लगायतका वस्तुहरु सजिलै बल्न सक्छन् ।”
यसैगरी ‘आकाश गड्याङगुडुङ गरेको समयमा टिभी निभाउनु पर्छ कि पर्दैन ?’ भन्दा बकलले यस्तो भनेका हुन्, “मैले यसमा कुनै खतरा देखेको छैन र म आफैँले आकाश गर्जिरहेको समयमा टीभी निभाएको छैन ।” त्यस्तै टोस्टरमा टोस्ट अड्किएको छ भने त्यसलाई सुरक्षित साथ निकाल्न पहिले प्लग निभाउने त्यसपछि प्लग निकाल्ने र एउटा प्लास्टिकको पन्यौँले निकाल्न उनले सुझाव दिएका हुन् । द गार्जियनबाट